အကူႏညီႏ:ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ အစွဲးအကမ်း - Wikimedia Incubator
၁ Universal Language Selector
၁.၁ Why is my language missing from the Universal Language Selector?
၁.၂ What happened to "Narayam" and "WebFonts"?
၂ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလင် အစွဲးအကမ်းကိရိယာႏ
၂.၁ Typing: Edit tools
၂.၂ Multiple-script languages
၃ Need further help?
အချက်လျက်ꩻခရာႏစဲင်း အထဲင်းတာႏ ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ translatewiki.netကို။
လွူꩻထွားသွော့ Incubator:Community Portal မွေးတဝ်းလဲ့ translatewiki:Support။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Help:Language_support/blk&oldid=5294068"